उच्च रक्तचापबाट पीडित हुनुहुन्छ ? खानुस् यी खानेकुरा उच्च रक्तचापबाट पीडित हुनुहुन्छ ? खानुस् यी खानेकुरा
उच्च रक्तचापको कारण ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । उच्च रक्तचापका कारण अन्य रोगहरु समेत लाग्ने सम्भावना रहने भएकाले यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक औषधिको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्छ । केरा
सामान्यतयाः बजारमा सहजै पाइने फलफूलमध्ये केरा पनि एक हो । केरामा पोटाशियम भारी मात्रामा पाइन्छ । एक मध्यम आकारको केरामा ४२२ मिलिग्राम पोटाशियम पाइन्छ । अमेरिकी हार्ट एसोसिएशनका अनुसार पोटाशियमले सोडियमको प्रभाव कम गर्ने र रक्त नलीहरुको भित्तामा तनाव कम गर्छ । तरबुजा
गर्मी मौसममा सजिल्यै बजारमा उपलब्ध हुने तरबुजामा सिट्रललाइन नामक एमिनो एसिड हुन्छ । जसले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । सिट्रललाइनले शरीरमा नाइट्रिक अक्साइड उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ । नाइट्रिक अक्साइड एक प्रकारको ग्यास हो यसले रक्त नलीमा रगत प्रवाहमा आराम दिलाउँछ । जसको कारण रक्तचाप नियन्त्रणमा आउँछ । लसुन